That's so good, right?: 2008
Neighborly Help (II)
လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်လောက်ကတည်းက my sexual needs တွေအတွက် ကျေနပ်နှစ်သိမ့်တဲ့ ဖီးလ်ကိုအကြိမ်ကြိမ်ရရှိခံစားဖူးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်နေ့တည်းမှာ ၃ကြိမ်၎ကြိမ်လောက်ထိ ဖြစ်တာမျိုးမဖြစ်ဖူးခဲ့တာတော့အမှန်ပါ။(နှစ်နာရီ သုံးနာရီလောက်အတောအတွင်းမှာ တစ်ယောက် ကိုတစ်ယောက်ပြုစုရင်း)ကျွန်တော် တကယ်ပြီးခဲ့တာလား ပြီးဆုံးခါနီးထိဖြစ်ခဲ့တာလား မတွေးမိတော့ပါဘူးလေ။
Bill သူပြီးသွားတော့ ပျော့သွားတဲ့လီးကိုခပ်ဖြည်းဖြည်းထုတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အိပ်ယာပေါ်မှာ ဆက်လက်လှဲလျောင်းပြီး ငြိမ်နေမိတော့တာ။ ရှက်တာလား ဘာလားမသိ ဆုံးရှုံးတာလည်းမဟုတ်။ ခဏတော့ Bill နဲ့ မျက်နှာချင်းမဆိုင်ချင်သလိုပဲဗျာ။ မကြာခင်ကသူနဲ့အပြိုင်ချစ်ပွဲဝင်ခဲ့ပေမဲ့လေ။ လှဲပဲလှဲနေချင်သေးတယ် အိပ်ယာပေါ်မှာ။မွတ်သိပ်တောင့်တမိတဲ့ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုမျိုးကို ထပ်မံခံစားချင်သေးပေမဲ့ အခုလေးတင်ပဲပြီးခဲ့တာဆိုတော့။
Bill ကျွန်တော့်နံဘေးမှာ တခြမ်းစောင်းလှဲပြီး သန်မာတဲ့သူ့လက်မောင်းကြီးတွေနဲ့ နွေးနွေးထွေးထွေး ဖက်တယ်။ပြီးတော့ ကိုယ်ခန္ဓာအနှံ့ပွတ်သပ် ပါးလေးကိုလိုလိုချင်ချင်နမ်းပါတယ်။ သူ့ရင်ခွင်ထဲမှာ လုံခြုံသလို ခံစားရတဲ့ဖီးလ်တစ်မျိုးကို ခံစားရမိပြန်တာထူးတော့ထူးဆန်းသား။ သူ့ဘက်ကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ သူ့ကိုကျစ်ကျစ် ပါအောင် ပြန်ဖက်ထားမိတယ်။ ရုတ်တရက် ရင်ထဲမှာ အပျော်သွေးတွေစီးဆင်းလာသလို ဘာမှန်းမသိတဲ့ အပျော်မျိုးရရှိလာပြန်သပေါ့။ Bill ကတော့ ကျွန်တော့်ကျောပြင်ကို ပွတ်သပ်ပေးရင်းအနားယူ သလိုငြိမ်နေ တယ်....ဟူး။
ကျွန်တော့်ခေါင်းကို အသာဆွဲယူလိုက်ရင်း နှုတ်ခမ်းသားတွေကို ခပ်ဖွဖွသူနမ်းတယ်။(တစ်ခြားလူတစ်ဦးက ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းကိုနမ်းတာ ဒါဦးဆုံးပါပဲ။) မှတ်မိသလောက်ပြောရရင် ဒက်ဒီရှိတုံးကလည်း ပါးနှစ်ဖက် ကိုသာနမ်းမွှေးခဲ့တာပါ။အခုတော့ဒီအနမ်းဟာ ရင်ခုန်စေမှန်းသိလိုက်ရပါပြီ။
Bill လက်နှစ်ဖက်နှင့် ကျွန်တော့်ခေါင်းကိုထိန်းကိုင်ရင်း နှုတ်ခမ်းသားတွေကို ရှာဖွေနေဆဲ သူ့နှုတ်ခမ်းအစုံနဲ့ပေါ့။ ပြီးတော့လည်း သူ့ရဲ့ပူနွေးနေတဲ့ လျှာကလေးနဲ့နှုတ်ခမ်းကြားမှတဆင့် ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲတိုးဝင်လာတယ်။ သူလုပ်သမျှ ရင်တဖိုဖိုနဲ့ သူလုပ်တဲ့အတိုင်းပြန်လုပ်ကိုင်ပေးမိနေပေါ့ဗျာ။ သူ့လျှာကထဲထဲဝင်ဝင်နဲ့ ကျွန်တော့် လျှာကို အငမ်းမရမွှေနေတာက ရင်ခုန်နှုန်းကိုမြှင့်ပေးနေသလိုပါပဲ။ ဟိုး.....လေဟာနယ်ထဲ ကိုခေါ်သွား နေသလိုမျိုးစိတ်တွေဟာ လွတ်ပြီး သူ့အနမ်းဖွေရှာမှုမှာ အသက်ခပ်ပြင်းပြင်း ရှိုက်ရင်း မျောပါလို့ပေါ့ ကျွန်တော့်မှာ။
Bill သူအနမ်းတော်တော်ကျွမ်းကျင်သလို လူတစ်ယောက်စိတ်နိုးကြွလာအောင် ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာလည်း နားလည်သူပါ။ အခုနှုတ်ခမ်းများကနေ မျက်နှာတစ်ခုလုံးရှိ အစိတ်ပိုင်းတိုင်းကို ခပ်ဖွဖွနမ်းတော့တာပါ။ နားရွက်ထဲကိုလည်း လျှာနဲ့ကလိတာ ကြက်သီးဖြန်းကနဲ ထမိသေးတော့။ ပြီး မေးဖျားတလျှောက်ကိုလည်း အနမ်းမြမြပေးသေးတာ။ တဖြည်းဖြည်းအောက်ပိုင်းကို ရွေ့လာပြီး ကျွန်တော့် Chest ပေါ်မှာရှိတဲ့ အညိုရောင်နို့သီးခေါင်းလေးကိုလည်း ခပ်မြှင်းမြှင်းစုပ်ပေးတာများ...တစ်ကိုယ်လုံးမှာ ဖီးလ်ကပျံ့နှံ့ထကြွလို့ပေါ့။ အား....ထူးဆန်းသား....ကျွန်တော့်ညီဘွားကလည်း နောက်တစ်ကြိမ်အတွက် မာထောင်ပြီးထလာပါရော။
ကောင်းကောင်း Trained တဲ့ Bill ရဲ့လျှာလေးဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ဘယ်ဘက်နို့သီးခေါင်းလေးကို ၀ိုက်ကာ ၀ိုက်ကာကစားပေးချိန်မှာတော့လီးတစ်ချောင်းလုံးမာတောင်ထလာပုံများ Foreskin တောင်ဆွဲ ဆန့်နိုင်တဲ့ limit ကျော်တဲ့အထိပါပဲ။ အား...အ Bill တော်တော့ဗျာလို့ပြေနေမိပေမဲ့ သူ့ရဲ့Licking ကောင်းမှုကိုတော့ တကိုယ်လုံးက ငံ့လင့်နေဆဲ။ သူ.....သူကလည်း Chest ကတစ်ဆင့် တဖြည်းဖြည်းချင်း ဘယ်လီသားတွေဆီ၊ချက်ကလေးကို လျှာနဲ့မွှေ၊ပြီးတော့ My Treasure Trail ရှိရာကို။ ဘယ်နေရာကိုဘယ်လိုထိရင် ဘယ်ပွိုင့်ကိုကလိရင် ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာသူကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ကိုသိနေတာဗျ။ ကျွန်တော့်ဒစ်ထိပ်ဖျားက အရေပြားလေးကို ခပ်ဖြည်းဖြည်းဆွဲငုံ၊ ထိပ်ဝလေးကိုလျှာနဲ့ကလိ၊ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လီးထိပ်ကနေ အဆုံးထိ သူ့ရဲ့စိုစွတ်တဲ့ ပါးစပ်ထဲသွင်းပြီး Mouth fucking လုပ်ပေးတာ။သူဟာ အတော်တော် တဲ့ cock sucker တစ်ယောက်ပဲ။ ‘ဒီလိုကောင်းကောင်းအစုပ်ခံချင်နေတာကြာလှပြီ။ လရည်တွေ လည်းအပြင် ကို ပန်းထုတ်ဖို့ ဥထဲမှာအဆင်သင့်ပြည့်နေပြီ....ရှီး..။
ကြာရင်ပန်းထုတ်မိတော့မှာတော်ပြီ....အား..သူ့ခေါင်းကိုဆွဲဖက်ပြီး ဆက်မစုပ်ဖို့တားလိုက်မိတယ်။ နည်းနည်း လေး အချိန်ဆွဲချင်လို့ပေါ့ဗျာ။ သူကလည်းအလိုက်တသိပါပဲ။ ဒါကျွန်တော့်အတွက် ပထမဆုံး man – to – man အတွေ့အကြုံမဟုတ်လား။ တောင့်တမိခဲ့တဲ့ စိတ်ဆန္ဒမျိုးအကြိမ်ကြိမ်ထမြောက် နေတဲ့ညလေး မဟုတ်လား။
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံး အ၀တ်မပါဘဲ အတော်ကြာအိပ်ယာပေါ်လှဲနေမိကြတယ်။ နာရီအနည်းငယ်ကြာလို့ ကျွန်တော်ပြန်နိုးချိန်ရောက်တော့ Bill ရဲ့၈လက်မနီးပါးလောက်ရှိတဲ့ လီးကြီးက ငေါထွက်နေရော သူ့ပေါင်ကြား ထဲမှာလေ။သူကဒီတစ်ခါ ကျွန်တော့်အလှည့်တဲ့။
Bill က ပက်လက်အိပ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ခေါင်းပေါ်ခွပြီးပါးစပ်နဲ့လီးတဲ့အောင်လုပ်ပေးတော့ ကျွန်တော်ကလည်း အလိုက်တသိပေါ့ဗျာ အသာဆွဲကိုင်ပြီး ပွတ်သပ်ပေးနေမိတယ်။ ပြီးတော့မှ မာတောင်နေတဲ့သူ့ညီဘွားကို ထိပ်ဖျားလေးကို ငုံစုပ်ပေးနေမိတာ။ ထိပ်အရေပြားနှင့် ကွမ်းသီးခေါင်းကြားနေရာလေးကို လျှာနဲ့ကစား၊ အပေါက်လေးကိုလည်း ကလိပေးတော့ Bill လေသူ့ခါးကိုကစားပြီး Mouth fucking လုပ်လာတာ တစ်ခါတစ်ခါ လည်ချောင်းထဲရောက်သွားမလားပဲ။ “ အဟွတ်..အဟွတ်”သူ့ဟာကခပ်ထွားထွား ရှည်လည်းရှည်တော့ တစ်ချောင်းလုံးကို ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲထည့်ဖို့ကျိုးစားမိတာ ချောင်းကိုဆိုးရော။ လျှာလေးနဲ့ ကွမ်းသီးခေါင်း တစ်ဝိုက်ကို ၀ိုက်ဝိုက်ပြီးလျှက်ပေးလိုက်၊ထိပ်ကနေအဆုံးထိငုံပြီး mouth fucking သဘောမျိုးခေါင်းကို ကစားပေးလိုက်လုပ်ပေးမိတာပေါ့ လုပ်တတ်သမျှအကောင်းဆုံး။ ထိပ်အရေပြား ဖြတ်ထားတဲ့သူ့လီးဟာ မာသထက်မာလာပြီး အသက်ရှူသံဟာလည်းအမြင့်ဆုံး.....အဟင်း....ပါးစပ်ထဲကိုကော့ကော့ပြီး ပန်းထုတ်လိုက်တာ အရသာက ငန်ကျိကျိနဲ့။သူပြီးသွားပေမဲ့ ပန်းရောင်အပေါက်လေးကို လျှာနဲ့ဆက်ကစားပေးနေမိသလို ပျော့သွားတဲ့အထိ စုပ်ပေးနေမိဆဲပါ။ သူကပြောတယ် မင်းကအတတ်မြန်သားပဲ တဲ့...ဟီး။
သူ......ပြီးသွားတော့ ခုတင်စောင်းလေးပေါ်မှာခါးကိုတင်ပြီးလှဲလိုက်တယ်။ခါးအောက်မှာ ခေါင်းအုံး လေးကိုခုရင်းပေါ့။သူ့ပန်းရောင်အပေါက်လေးက ရဲနေတာပဲ......။ ကျွန်တော်လည်းသူလုပ်ပေး ခဲ့တဲ့အတိုင်း လျှာလေးနဲ့ကလိပေးလိုက်တော့ မကြာခင်မှာပဲ သူက လိုးချင်လားတဲ့မေးတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲက ၅လက်မကျော်ရှိပေမဲ့ ကောင်းကောင်း လုပ်ပေးနိုင်တာပေါ့....အရသာကောင်း ကောင်း သူ့ကိုပေးနိုင်ရမှာပေါ့။ KY Lubricant ဘူးကို ယူချောမွေ့သွား အောင်နည်းနည်းလိမ်းပြီး ခပ်ဖွဖွထိုးသွင်းမိတယ်။ ပြီးမှ အထုတ်အသွင်းနှေးနှေးလုပ်ရင်း ချောမွေ့သွားတဲ့ အခါကျမှ အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ကို စောင့်လိုက်မွှေလိုက် လိုးလိုက်တာ....အားပါးပါး...သိပ်ကောင်းတာပဲအရသာက။ အချိန်သိပ်ကြာအောင်မထိန်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး ပန်းထုတ်လိုက်မိတယ်လေ။ ဒါကကျွန်တော့်လူပျိုဘ၀ကို အဦးဆုံးထားရစ်ခဲ့တဲ့ညမဟုတ်လား။ သူများတွေလို တပ်ထွက်မဖြစ်တာတော်သေးတယ်လို့ပြောရမယ်။ အဆင်ပြေပြေနဲ့ဖီးလ်ရှိစွာပဲ Bill ရဲ့ Anal ကို ဟီး...ဟီး လိုးနိုင်ခဲ့တယ်ဗျ။ နည်းနည်းတော့နာတယ်ဗျာ ထိပ်အရေပြားဖြတ်မထားလိုလားမသိဘူး..သွင်းခါစမှာထိပ်က တင်းနေတာ။ ပြီးတော့ သူ့ဖင်ထဲမှာပဲ လူပျို့အားတွေပန်းထည့်မိတာ အများကြီး။ သူဟာ ကျွန်တော်နဲ့ နေရတာကို နှစ်သက်သတဲ့ဗျာ။
ဟူး.....နှစ်ယောက်လုံးအတွဲညီညီ ချစ်ပွဲဝင်ကြပြီး နောက်တနေ့နေ့လည်အထိအိပ်ပျော်သွားမိကြတာပေါ့။ Bill ကကျွန်တော့် Pre cum တွေပေနေတဲ့ အတွင်းဘောင်းဘီရော၊သူ့ဘောင်းဘီတွေကို အ၀တ်လျှော်စက်ထဲ ထည့်ပြီးလျှော်ပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ ရေချိုးခန်းထဲမှာ နှစ်ဦးသားဆပ်ပြာအတူတိုက်ပေးရင်း ကလူကျီဆယ် မိကြတာ တော်သေးတယ်ချော်မလဲတာ။ကျွန်တော့်မွေးနေ့ ညစာစားပွဲလေးအကြောင်းကတော့ ဒီမျှသာပါပဲ။ အမြဲအမှတ်ရမိမယ့် ဦးဆုံးညလေးမဟုတ်လား။
Bill နဲ့ကျွန်တော့်ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာ ပိုမိုခိုင်မာလာကြသလို သံယောဇဉ်လည်းခိုင်မာလာကြပါတယ်။ college years တလျှောက်လည်း လုံးဝအဖော်အသစ်မရှာဘဲ သူနဲ့သာမြဲမြံဖြစ်ခဲ့တယ်။ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ college တက်ခါစကာလတွေမှာလည်း ကုန်ကျစရိတ်တော်တော်များများကို ကျခံပေးခဲ့တာပါ Bill က။ တက္ကသိုလ်တက် တော့ Scholarship ရတာနဲ့ သူ့အကူအညီကိုယူစရာသိပ်မလိုတော့ဘူး။မိန်းကလေးတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံ ဖို့လုံးဝမကြိုးစားဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ တစ်ခါတစ်လေမှာ သူတို့လီးစုပ်ပေးတာကို ခံယူဖူးပေမဲ့ Bill နဲ့တော့ နှိုင်းယှဉ်၍ မရစကောင်းပါ။ သူက အကောင်းဆုံးပါ ကျွန်တော့်အတွက်လေ။
Bill က weekends တွေမှာ သူ့ရဲ့အိမ်မှာ သူ့လိုဝါသနာတူ ပါတနာတွေနဲ့ အ၀တ်မပါတဲ့ ပါတီပွဲတွေ ဆင်နွှဲလေ့ရှိ တာကိုသိရပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ white brief ပေါ့ Bill ကတော့ Jockey grays နဲ့လေ။
သူနဲ့ကျွန်တော် အသက်အတော်ကွာတယ်။ဒါပေမဲ့ သံယောဇဉ်နဲ့ စိတ်ကတော့ရွယ်တူတွေအလားပါပဲ။ နှစ်များ စွာကြာလာတော့ Bill ရဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်ပုံကိုနှစ်သက်မိသလို ကျွန်တော်သည်သူ့အတွက်၊ သူ့အတွက် ကျွန်တော်သည် အရေးပါဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာကြတာ။ ကဲ...ပါလေ သူဟာ အိမ်နီးချင်းကောင်း.....ပြီးတော့ Partner ကောင်းပါပဲ။
Posted by Alex Aung at 7:33 PM 1 comment:
ကျွန်တော့်အသက် ၁၆နှစ်မှာ ဒက်ဒီဆုံးတယ်။မိသားစုတစ်ခုလုံးကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့၊ ရပ်တည်ဖို့ မာမီအလုပ်ကို ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ရပြီပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ မိသားစုမှာ အခုဆို မာမီရယ်၊ ကျွန်တော်က အကြီးဆုံး၊ Brian က ကျွန်တော့်ထက်နှစ်နှစ်ငယ်တယ်။ပြီးတော့ Sam က ဒက်ဒီဆုံးတော့ ၁၀နှစ်ပဲရှိသေးတယ်လေ။
ရပ်တည်ရတာ သိပ်အလွယ်အကူကြီးတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ မာမီ့ဝင်ငွေနဲ့ အိမ်ရဲ့အသုံးစရိတ်တွေ၊ စားပွဲပေါ်မှာ စားစရာအသင့်၊ အခြားကလေးတွေ ၀တ်ဆင်သလို တန်ဘိုးကြီးအ၀တ်အထည်တွေ မ၀တ်နိုင်ပေမဲ့ တော်သင့်ရုံ အ၀တ်အထည်တွေတော့ ၀တ်ရတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ အမြဲတမ်း သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ ၀တ်ဆင်၊ အစာ ရေစာကတော့ မပြတ်ခဲ့ပါဘူး။မာမီ့ကျေးဇူးပါပဲ။
ကျွန်တော် ဆယ်ကျော်သက်နှစ်များကိုကျော်လွန်လို့ အခုအသက် ၁၈နှစ်ရှိပါပြီ။အရာအားလုံးဟာ အဆင် ပြေချောချောမွေ့မွေ့ပါပဲ။ မာမီက အရွယ်ရောက်သူတွေ သိတဲ့ အသိဥာဏ်ပညာမျိုးရှိ စေချင်သလို၊ အပေါင်း အသင်းတွေကြားမှာလည်း ၀င်ဆံ့လှုပ်ရှားစေချင်သူပါ။ အရွယ်ရောက်လူငယ်တွေ သွားလေ့ရှိတဲ့ ပွဲလမ်းသဘင် တွေမှာ၊ ကျောင်းကကျင်းပတဲ့ Funfair တွေ၊အရေးပါအရာရောက်တဲ့ နေရာတွေကိုသွားဖို့ ကျွန်တော်တို့ မိသားစုရဲ့ budget ကိုအနည်းနဲ့အများတော့ ထိစေတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်ခဲ့သလို ၊ အဲဒီ အတွက် ကုန်ကျစရိတ်တော်တော်များများကို အိမ်နီးနားချင်းဖြစ်တဲ့ Bill ကကုန်ကျခံပေးတဲ့အတွက်ပါ။ သူက ကျွန်တော်တို့ မိသားစုရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေကို အမှန်အကန်သိသူလေ။
Bill က လူပျိုလူလွတ်တစ်ဦးပါ။ ဘဏ်တစ်ခုရဲ့ Vice president တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အခွန်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Private Tax Accountant လည်းလုပ်ပါတယ်။ မာမီ့အခွန်ကိစ္စကိုလည်း သူပဲဖြေရှင်း ပေးခဲ့တာ။ အဲဒါကြောင့်လည်းသူက ကျွန်တော်တို့မိသားစု အခြေအနေကို သိနေတာပေါ့။ Bill ကကျွန်တော်တို့ ဘုရားကျောင်းမှာလည်းတက်ကြွလှုပ်ရှား တတ်သူတစ်ဦးပါ။ ကျွန်နော်တို့ Boy Scout Troop ရဲ့ Assistant Scoutmasters တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အဆင်ပြေစွာ ပါဝင်နိုင်ခဲ့ပါတယ် in the Scouts မှာ။ Bill က ကျွန်တော့်အတွက် ကူညီဖို့ဆိုအမြဲအဆင်သင့်ပါပဲ။ ကုန်ကျစရိတ်တွေ ဖြေရှင်းဖို့သာမက budget တော်တော်များများအတွက်ကိုရော ဖြေရှင်းဖို့ပါ။
အသက် ၁၇နှစ်လောက်ကစပြီး Bill ကိုသူ့အိမ်မှာ တောက်တိုမယ်ရအလုပ်လေးတွေလုပ်ရင်း အကူအညီ အဖြစ်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ရှေ့မြက်ခင်းတွေကိုညီအောင် ရိတ်ပေးတာ၊ နှင်းတွေဖုံးနေရင် ဂေါ်ပြားနဲ့ထိုးပြီး ဖယ်ပေးတာတို့၊ သူ့ရဲ့ ပရိဘောဂတွေ နေရာပြောင်းချင်ရင်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မီးကြိုးသွယ်တာကအစ Bill က လုပ်ခိုင်းတဲ့ ကိစ္စအတော်များများ လုပ်ကိုင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အချိန်နည်းနည်းကြာလာတော့ ဒီကိစ္စဟာ ပုံမှန် လည်ပတ်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ် လာတာပေါ့လေ။ စနေနေ့ညတွေဆိုရင် ခြံဝင်းအတိုင်းဖြတ်လျှောက်သွားပြီး Bill ရဲ့ကိစ္စတွေကို ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးဖြစ်ပါတယ်။
သူ ကျွန်တော့်ကို ကောင်းကောင်းကိုပေးပါတယ်။တစ်ခါတစ်လေ ဘာမှပြီးအောင်မလုပ်ရဘဲ ပိုက်ဆံအတော် များများကိုပေးတာဗျ။ Bill ဟာကျွန်တော့်အတွက် သာမန်အိမ်နီးချင်းထက် အဓိပ္ပာယ်ပိုပါတယ်။
သူ့အတွက် ဘယ်ကိစ္စမဆိုလုပ်ကိုင်ပေးဖို့ ကျွန်တော်အသင့်ဖြစ်နေသလို ကျွန်တော်ပြဿနာ တစ်ခုခုကို မျက်နှာချင်းဆိုင်မိတိုင်း Bill ကူညီဖို့အဆင်သင့်။ အချိန်တော်တော်များများမှာလည်း မာမီနဲ့ Discuss လုပ်လို့ မရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို သူနဲ့အဆင်ပြေပြေ Discuss လုပ်လို့ရတယ်။ လူငယ်လေးတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်၊ ဖြစ်ပျက်နေတာ၊ မသိနားမလည်တာတွေကို အကြုံပြု ၊ဆုံးမ ပေးတတ်တော့ “အဖေတစ်ယောက်ရဲ့ အသွင် အပြင်”လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာ ခံစားရတယ်။ သူနဲ့စကားပြောရတာ သက်သောင့်သက်သာရှိ တယ်ဗျ။
အသက် ၁၈နှစ်ပြည့်ဖို့ အနည်းငယ်သာလိုတော့တယ်။ Bill ကပြောတယ် ကျွန်တော့်မွေးနေ့အတွက် ဘယ်ကို ခေါ်သွားရမလည်း၊ ပြီးတော့ ဘာတွေလုပ်ချင်လည်း သူသိချင်တယ်တဲ့။ ဘယ်လိုပြန်ပြော ရမှန်းမသိဘူးဗျ။ ဒါနဲ့ပဲ သူကအိမ်နီးနားက အသားကင်ဆိုင်ကိုခေါ်သွားပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ညစာအတူစားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ညစာစားပြီးတော့ ကျွန်တော် Bill အိမ်ကိုပဲ ပြန်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့အတူ။ ဒီလို Special Day ကို Celebrate လုပ်ဖို့ Wine နည်းနည်းလောက်ဝယ်ခဲ့ဖို့ သူ့ကိုတောင်းဆိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
၀ိုင်တစ်ခွက်နှစ်ခွက်လောက်လည်းသောက်ပြီးရော ကျွန်တော် ရီဝေေ၀နဲ့မူးစပြုလာပါတယ်။ ဒီတော့ Bill ကခုတင်ပေါ်မှာသွားပြီးအနားယူဖို့ကိုပြောရင်း ဒီညသူ့အိမ်မှာ ကျွန်တော်အိပ်မည့်အကြောင်း မာမီ့ဆီ ဖုန်းဆက်ပေးပါတယ်။ မာမီက အိုကေတဲ့။
ခုတင်ပေါ်မှာ သက်တောင့်သက်သာလှဲလျောင်းရင်း မျက်စိကိုမှိတ်ငြိမ်သက်မိတယ်။ တစ်နာရီလောက်အကြာ ရုတ်တရက်နိုးလာတော့ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ်မှာ စောင်ပါးတစ်ထည်လွှမ်း လျက်သား။ Bill ကအခန်းရဲ့ ထောင့်ချိုးနား က ဆိုဖာပေါ်မှာ မှီထိုင်ရင်းစာဖတ်နေတယ်။ ရုတ်တရက် အိပ်ယာပေါ်မှာ အိပ်ပျော်သွားမိလို့ သူ့ကို ဆောရီးလို့ပြောရင်း ထထိုင်လိုက်တော့ ကကျွန်တော့်ခြေထောက်က ရှူးတွေ၊ ဘောင်းဘီးရှည် နှင့် ရှပ်အင်္ကျီတွေကိုချွတ်ပေးထားတာကို သိလိုက်ရပါတယ်။ အခုကိုယ်ပေါ်မှာ တီရှပ်ရယ်၊ အဖြူရောင်အောက်ခံ ဘောင်းဘီရယ်၊ခြေအိတ် ရယ်ပဲ ၀တ်လျက်သားရှိတော့တယ်။ ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ စိတ်အနှောင့်အယှက် တော့ ဖြစ်မိတာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ Bill က အ၀တ်အစားတွေနဲ့ ရှုပ်မနေစေချင်လို့ ချွတ်ပေးထားတာတဲ့လေ။
အင်း......ဘောင်းဘီထဲက ငပဲကမာထောင်ထလာတော့ ဆီးသွားချင်တာနဲ့ သန့်စင်ခန်းရှိရာကို under wear လေးနဲ့လျှောက်သွားရတာ။ကိုယ့်မိသားစုရှေ့မှာ မဟုတ်ဘဲ တစ်ခြားသူရဲ့ရှေ့မှာ တစ်ခါမှဒီလိုမနေဖူးဘူး၊ ပြန်ဝင် လာတော့ Bill ကသူထိုင်နေတဲ့ဆိုဖာရဲ့ တစ်ဖက်ခြမ်းကို ကပ်ထိုင်ရင်း ဘေးမှာကျွန်တော့်ကို လာထိုင်ဖို့ အမူအယာပြတယ်။
ဒီလိုအသက် ၁၈နှစ်ပြည့်တဲ့ မွေးနေ့ညမျိုးမှာ မင်းတစ်ခါမှ မကြည့်ဖူးတဲ့ ရုပ်ရှင်မျိုး မကြည့်ချင်ဘူးလားတဲ့။ သူ့မှာ အဲဒီလို စီဒီတွေ၊ဒီဗီဒီတွေ ရှိသတဲ့။ ဟီး........ကျွန်တော် ကလည်း မငြင်းပါဘူး ဟုတ်ကဲ့ပါပေါ့။
ပထမ စီဒီခွေကို ဖွင့်လိုက်တော့ Porn movie တစ်ခု။ ဘဲတစ်ပွေနဲ့ စော်အမိုက်စားလေးနဲ့ လုပ်ကြကိုင်ကြတဲ့ Straight Sex Movie ပါ။အရင်က ဒီလို Porn movie ကို မကြည့်ဖူးခဲ့ဘူး။ အခုကြည့်မိတော့ ရင်တွေအရမ်း ခုန်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်။ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကိုမြင်ရတာလေ။ ကျွန်တော့်ညီဘွား ကိုရွှေလီးက ဘောင်ဘီထဲကနေထောင်ထလာတာ မိုးကတဲတစ်ခုကို သောင်ပြင်မှာ ဆောက်ထားသလိုပါပဲ။ စိတ်ထဲ မသိုးမသန့်ဖြစ်သွားပြီး ဘောင်းဘီအောက်အနားစတွေဆွဲဆန့် ၊ လက်နဲ့ဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစား မိတာပေါ့ ဗျာ။လူတစ်ယောက်ရဲ့ရှေ့မှာ လီးတောင်တာတစ်ခါမှ သိသိသာသာ မဖြစ်ဖူးခဲ့ဘူး။အသက် ၁၄နှစ်လောက် ကတည်းက ဂွင်းထုခဲ့တာ ဒါပေမဲ့ အခုတစ်ကြိမ်ပဲ ကျွန်တော့်ရဲ့လီးတောင်နေတာကို သူများမြင်တာ ပထမဆုံး ပေါ့။
Bill က “သက်သောင့်သက်သာနေစမ်းပါကွာ၊ ဖင်လိုးတာကြည့်ပြီး လီးတောင်တာ သဘာဝပါ။” သူလည်းစိတ်လှုပ်ရှားပြီးတောင်နေတာပါပဲတဲ့။ ဟူး......................သူ့ရဲ့ခါးက ဘောင်းဘီခါးပတ်ကို လျော့လက်တစ်ဖက်ကိုအတွင်းသွင်း ဟိုကစားဒီကစားနဲ့။ That got me hotter.
Bill ကသူ့ Pants and shirts တွေကို ချွတ်ထားရင်နေလို့ အဆင်ပြေမလားတဲ့ အဲဒီရုပ်ရှင်ပြီးသွားချိန်မှာပေါ့။ ဟီး....နောက်ရုပ်ရှင်ထပ် မထည့်သေးခင်မှာ နှစ်ယောက်လုံးအောက်ခံဘောင်းဘီလေးတွေနဲ့လေ။ အဲဒီဖီးလ် ကိုကြိုက်နေသလိုပဲ။ဆိုလိုတာက ကျောင်းက Locker room မှာတခြားကျောင်းသားတွေ Under pants နဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေကြတာကိုကြည့်ဖို့ အမြဲသဘောကျခဲ့တာ။ ဘာမှန်းမသိပေမဲ့ Bill ကိုအခုပုံစံနဲ့ကြည့် ရတာ စိတ်ထဲမှာHot အပဲ။သူ့ကိုလည်း That it would be cool လို့ပြောခဲ့တယ်။
ဒုတိယ Movie ကတော်တော့်ကို ထူးခြားတယ်ဗျ။ မိန်းမတွေတစ်ယောက်မှမပါတဲ့ ဘဲနှစ်ပွေဖိုက်တဲ့ဇာတ်ကား ပဲ။ ကြည့်ရတာကိုက အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ်။ တစ်ယောက်တည်လှည့်ဂွင်းထုပေးကြ ၊အပြန် အလှန်လီးစုပ်ပေးကြ၊နောက်ဆုံး anal fucking လုပ်ကြတာ......။ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးတုန်ရင်နေတာ ပြီးတော့စိတ်တွေဟာထူပူပြီးလွတ်နေသလိုပဲ။ အထူးသဖြင့် Bill တစ်ယောက် ကျွန်တော့်ကို ဖက်ရင်း လက်တစ်ဖက်က ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီကထိုးထိုးထောင် ထောင်ကိုပွတ်သပ်ကစားပေးတာ စိတ်အလှုပ်ရှားရ ဆုံးပါ။ လက်နဲ့ခပ်ဖွဖွကိုင်ပြီး ဂွင်းတိုက်ပေးတာ အား....အ။ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်ပါဘူး .......ရှက်တာ တွေလည်းမသိတော့ဘူး။ သူ့လက်မောင်းကိုဖက်ထားပြီးဘောင်းဘီထဲကို Pre-cum တွေထွက်မိသွားပေါ့။ မျက်နှာမှာလည်း ဘာအမူအယာတွေဖြစ်သွားလည်း သတိမထားမိတော့ဘူး။
Bill တစ်ယောက် ခေါင်းကိုငုံ့ပြီး ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီပေါ်က cum တွေကို လျှာနဲ့ဖြေးဖြေးလျက်ရင်း စိုစွတ် နေတဲ့ ကျွန်တော့်ဒစ်ခေါင်းလေးကို လျှာနဲ့လျှက်လိုက် အပေါက်လေးကို ကစားလိုက်နဲ့ Video tapes ထဲကဟာတွေလည်း သတိမရတော့ဘူး။တစ်ခါမှမခံစားဘူးတဲ့ Bill ရဲ့ လျှာနဲ့နှုတ်ခမ်းကပေးစွမ်းနေတဲ့ Feel ကိုတမေ့တမောမျောပါလို့။
ဆိုဖာပေါ်မှီထိုင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ပွေ့ချီပြီး အိပ်ယာကြီးပေါ်ကိုချ ကျွန်တော့် တီရှပ်၊ ပြီးတော့လည်း ကိုယ်ပေါ်......ခန္ဓာအနှံ့ အနမ်းများ၊ပွတ်သပ်နှိုးဆွမှုများ.....အား နောက်တစ်ခါ Climax ဖြစ်ချင်လာမိသလိုပဲ။
မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ လီးကပြန်မာလာတယ်။သူဆိုတဲ့ ကလီးတစ်ချောင်းလုံးကိုပါးစပ်ထဲကို သွင်းလိုက်တာကိုး။လီးထိပ်က အရေပြားကလေးကိုငုံစုပ်လိုက် ဆယ်ကျော်သက်ရွယ် ၅လက်မကျော် လီးတစ်ချောင်းလုံးကို ပူနွေးနေတဲ့ သူ့လည်ချောင်းထဲထိထည့်ပြီး ရှေ့ထိုးနှောက်ငှင်လုပ်လိုက်နဲ့လေ။ သူ့လျှာဖျားလေးနဲ့ ထိပ်အရေပြားကြားထဲ ထိုးထိုးမွှေချိန်မှာ ထိန်းမရတဲ့ အာရုံတွေဟာ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းအနှံ့ပျံ့ကျဲလိုက်စုသွားလိုက်နဲ့ ကျွန်တော့်လီးအရမ်းမာတောင်ရပြီပေါ့။ ဘာမှသိပ်မလုပ် လိုက်ရခင်မှာပဲ။ အား...ရှီး....အင်း မတတ်နိုင်ဘူး Bill ရဲ့ပါးစပ်ထဲကို ပန်းထုတ်ပစ်မိပြီ။ သူအားလုံးကို မျိုချပစ်လိုက်တာဗျ။
အခုသူ့ရဲ့ Gray Jockey briefs နဲ့တီရှပ်ကိုဆွဲချွတ်လိုက်တော့ ထွားထွားကြိုင်းကြိုင်း ၈လက်မလောက်ရှိတဲ့ သူ့ညီဘွားက ငေါက်တောက်ပေါ်လာရော။ သူ့လီးကို ပါးစပ်နဲ့ ပြုစုပေးပါလို့ပြောတော့ လက်နဲ့ခပ်ဖွဖွကိုင်ပြီး ပါးစပ်နဲ့မရဲတရဲစုပ်ပေးမိတယ်ပေါ့ဗျာ။ သူ့လီးကိုပါးစပ်ထဲဖြည်းဖြည်းသွင်းပြီး ငြိမ်နေမိတော့ သူကလျှာလေးနဲ့ pink head တစ်ဝိုက်ကိုလျှက်ပေးဖို့ ထိပ်ကိုငုံပြီးစုပ်ပေးဖို့ပြောလည်းပြော သင်ပေးသလိုလုပ်ပြတော့တာ။ လျှာလေးနဲ့ကလိလိုက်၊ကွမ်းသီးခေါင်းလေးကို ခပ်ဖွဖွလေးငုံစုပ်လိုက်လုပ်ပေးမိတော့ ပါးစပ်ထဲမာ တောင်လာ တာ ငှက်ပျောသီးခပ်၀၀ကို မျိုချနေရတဲ့အတိုင်းပါ။ သူသင်ပေးတာတွေရော ခဏနေကကြည့်တဲ့ ဇာတ်ကားထဲက ဘဲတွေလုပ်တဲ့အတိုင်း သူ့ငပဲကို ပြုစုလိုက်တော့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ အသက်ရှူသံဟာ ပြင်းထန်ထကြွလာတယ်။
မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတော့ ခုတင်ပေါ်မှာ မှောက်တဲ့။ဒီတော့ သူပြောတဲ့အတိုင်း အိုကေပေါ့။စိုစွတ်နေတဲ့ လျှာနွေးနွေးက ကျွန်တော့်အပေါက်လေးထဲ လျှောကနဲဝင်လာတယ်။ Licking လုပ် ပေးတဲ့အရသာ က....အား.....ဘယ်လိုဖီးလ်မျိုးလည်း....အ...အ။ပြီးတော့ သူ့လက်ချောင်းတွေနဲ့ တင်ပါးတစ် ၀ိုက်ပွတ်သပ်နှိပ်နယ်ပေးသလို လက်ညှိုးတစ်ဆုံး ခပ်ဖြည်းဖြည်းထည့်ပြီး my prostate ကိုကလိ တော့တာ။( male တွေရဲ့prostate ဆိုတာမိန်းမတွေမှာရှိတဲ့ G-spot နဲ့တူတယ်လို့ဆိုတယ်မဟုတ်လား။) Whatafeeling?
ခုတင်ဘေးစားပွဲခုံပေါ်က Vaseline ပုလင်းကိုယူ ကျွန်တော့် Butt hole မှာ ခပ်ဖွဖွသုတ်လိမ်းပြီး သူ့ရဲ့ cock ကိုသွင်းတယ်။ချော်သွားလိုက်ဝင်လိုက်နဲ့ ၀င်လာတာကိုခံစားရတာများ မချိမဆန့်ကိုနာတာ။ ဒါပေမဲ့ သူအလိုး ကျွမ်းတာလား မသိနှေးလိုက်မြန်လိုက် အသွင်းအထုတ်လုပ်ပေး ကလိပေးလာတော့ နာကျင်တာတွေဟာ ဒီရေအလားပဲ။ မကြာခင်မှာပဲ သူ့ရဲ့ဆောင့်ချက်နဲ့ rhythm မိမိလှုပ်ရှားလာနိုင်တယ်။
သူကတစ်ပြိုင်နက်ထဲမှာ ဖက်ကိုညှောင့်နေသလို လက်တစ်ဖက်ကလည်း ကျွန်တော့်ဒစ်ကိုကိုင်ပြီး လှုပ်ရှားပေးနေတာ။ အား....ခပ်ဖြည်းဖြည်းဆွဲထုတ်လိုက် လီးတစ်ချောင်းလုံးကို အဆုံးထိဖိပြီး ထည့်လိုက် နှဲ့နေတာ များ......ရှီး...။ ခဏနေတော့ ဆောင့်ချက်မြန်လာသလို moan အသံက ကျုယ်လောင် လာခါ အတွင်းထဲမှာပဲပြီးသွားတာ......နစ်နေတာပဲအရသာက။ Oh man! Whatafeeling!
Posted by Alex Aung at 4:14 PM 1 comment: